Huawei wuxuu suuqa ka bilaabi doonaa taleefankiisa isku laaban sanadka 2019 | Androidsis
Tartanka lagu soo saarayo taleefanka ugu horeeya ee isku laaban suuqa ayaa u muuqda in Samsung ay tahay guuleyste cad. In kasta oo shirkadda Kuuriya aysan ahayn tan kaliya ee ka shaqeyneysa noocyada taleefannadaas, maaddaama noocyada kale ay hadda soo saarayaan qalab iyaga u gaar ah. Kuwaas waxaa ka mid ah waxaan heleynaa Huawei. Maamulaha guud ee shirkada ayaa wareysi siiyay xilli Jarmal ah, isagoo kuhadlaya taleefoonkan.
Waad ku mahadsantahay wareysigan Shirkadda Huawei waxay xaqiijisay inay soo saarayso taleefankeeda isku laabma. Waxay ahayd wax la yaqaan, laakiin hadda waa maamulaha shirkadda oo xaqiijinaya jiritaankeeda. Wuxuu sidoo kale ka hadlayaa soo bandhigida qaabkan suuqa.
Waxaad faallo ka bixisay in telefoonka la laaban karo la bilaabi doono sanadka soo socda.. Erayadiisa, sanad kadib hada, taleefanka gacanta ee isku laaban ee Huawei waa inuu horeyba uga jiraa suuqa. Markaa waxay aad ugu dhowdahay kahor bisha Sebtember ee sanadka dambe in mar horeba la iibin doono.
Inkastoo xilligan taariikho cayiman oo ay bilaabeyso lama rabin ama la awoodin in la xuso. Waxa laga faallooday waa himilada shirkadda ee arimahan. Waxay u arkaan awoodda weyn ee taleefannada isku laaban, taas oo xitaa beddeli karta kombuyuutarrada.
Tani waa wax dhici kara, sida uu sheegay madaxa shirkadda Huawei, laakiin weli waxaa jira waddo dheer oo loo maro. Suuqa wali wuu siinayaa tillaabooyinka ugu horreeya ee duubista taleefannada. Marka waa hammi, halkii laga lahaa qorshe run noqon doona muddada dhexe.
Xaqiiqdii bilaha soo socda wax badan ayaan ka ogaan doonnaa taleefanka isku laaban ee shirkadda. Huawei sidan ayuu ku yahay shirkadda labaad, ka dib Samsung, si loo xaqiijiyo jiritaanka taleefanka noocan ah. Waan arki doonaa waxa shirkad kasta ay bixiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Telefoonka la laaban karo ee Huawei wuxuu imanayaa 2019